August 2020 – Majaladda
Leave a Comment	/ 2020 / By Cabdifataax Xasan Maxamed (Barawaani)
Sannaddii 2011-kii dawladda Itoobbiya waxa ay diyaarisay mashruuc ku baxaya lacag qiimaheedu dhan yahay 4.5 billion dollar, mashruucaasna waxa ay ugu magac dartay ?Grand Ethiopian Renaissance Damp ? GERD?. Kaas oo laga dhisay gobolka Benishangul-Gumuz ee dhanka bari u xiga xuduudda Itoobbiya ay la leedahay dalka Suudaan. Waxaana mashruuca loogu talogaley in uu dhammaado sannadka …
Dagaalka biyaha ee Afrika: Xiisadda Masar iyo Itoobbiya Read More »
Qoraalladii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlay sunta lagu duugay badda iyo barriga Soomaaliya, kuwaas oo aan baahiyay bilihii Febraayo iyo Maarso ee sannadkii hore 2019. Waxa aynnu ku dhex sheegnay maqaal ciwaankiisu ahaa ?The Italian Connection: How Rome Helped Ruin Somalia?? oo uu saxafi Talyaani ahi ku qorey jariiradda Washington Post, sannadii 1993-kii. Haddaba …
Xidhiidhka Talyaaniga: Sidee ayay Rooma uga qeybqaadatay burburkii Soomaaliya? Read More »
Warbixin ka kooban 25-bog oo ay diyaarisay hay?adda dhexe ee sirdoonka Maraykanka (Central Intelligence Agency ? CIA) ayaan akhriyay. Walow 25-ka bog meelo badan oo xasaasi ah ay qariyeen, haddana nuxurka iyo falanqeytuba waa ay muuqdaan. Goobaha ay qariyeenna, arrimo la xidhiidha siyaasaddooda amni ayaa u qariyeen. Warbixintani waxa ay ku saabsantahay xaaladda ay ku …
Guudmar Warbixin: The Ogaden Situation by Central Intelligence Agency (CIA) on April 07, 1980 Read More »